Oge nzipu: Na 2 izu
Tụkwasịnụ ikike: 1,000 PC kwa ọnwa
ZBK enweghị isi injector emi esịnede abụọ akụkụ
1, a akụkụ-agụnye a akpali mmasị otu na-eji ndochi nkwụnye na a disposable otu eji akpali mmasị 0.3 ml gụsịrị akwụkwọ na-enweghị isi ntụtụ (ampoule). Ha bụ ndị isi na-akpọ ndabere nke baghị uru injector.
2, a na-agụnye ya Injector na Tọgharia ojii na-enye powder maka ọgwụ
Structure nke ọ bụla akụkụ
1.sterile otu-eji na-ejuputa nkwụnye: Cap, agịga njide na agịga tubing.
2.Disposable otu eji akpali mmasị na-enweghị isi ntụtụ: gbọmgbọm, Plunger ma isi mmanya.
3.Injector: injector ahụ, mma mkpọchi n'èzí mgbanaka, mma mkpọchi n'ime mgbanaka na akpalite.
4.Reset ojii: mgbali elu cover, resetting mmanya, resetting ebe njide.
Product arụmọrụ ụkpụrụ
Ọ baghị uru injector bụ a ọgwụ ngwaọrụ site na nsogbu na-adịghị mkpa agịga n'oge ịgbanye. Site n'iji super ike pụrụ iche mmiri ka na-etolite a elu nsogbu, n'okpuru nrụgide a, mmiri mmiri ọgwụ ga-aga site na a nnọọ mkpa onu na-emepụta a mmiri mmiri iyi nke banye n'ime akpụkpọ ịgba na subcutaneous oyi akwa site na agịga ntụtụ.
1.Eliminate na ịgbanye mgbu.
2.Eliminate puncturing omume kpatara agịga.
4.No Calluses, ọzịza, ahu otutu na-akawanye njọ.
6.No mkpa ịsa na mfe aka; obere size na mfe na-ebu; amblyopic ndidi nwekwara ike iji ya.
Product were iwebata
1.Prepare na injector
2.Fill na ntụtụ
Product quality nkwa
Anyị ụlọ ọrụ nwere ebe ISO9001, ISO013485 mba quality akwụkwọ na ISO14001 mba gburugburu ebe obibi akwụkwọ.
The ụlọ ọrụ nwere anụ ahụ, chemical, ndu laboratories na nnukwu-ọnụ ọgụgụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ na ngwá iji hụ na na ngwaahịa ndị pyrogen-free, na-egbu egbu-free. Anyị na-enwe sample ụlọ iji hụ na ngwaahịa mma.
Service na nkwa
The baghị uru Injector arụpụtara site Shandong Zhongbaokang ọgwụ implements Co., Ltd a nditịm-anwale, kpatụ na ndenye iji hụ na ngwaahịa ezi mma. Ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ ọdịda n'oge eji ma ọ bụ àgwà nsogbu, biko na-akpọ anyị ahịa ngalaba na-achọ mmezi, ekwentị Nke bụ + 86-0533-8688533.
Nkwa siri: anyị Injector na Tọgharia ojii nwere otu afọ akwụkwọ ikike oge kemgbe ịzụta ụbọchị na FillingAdaptor na baghị uru ntụtụ (ampoule) nwere afọ abụọ akwụkwọ ikike oge kemgbe nwoke ịga ụlọ ọgwụ ụbọchị.
Previous: Infusion Set With kpọmkwem iyo na One Spike
Next: Igbo nkwụnye
Medical baghị uru Injector
Mesotherapy Ọgwụ Gun
Agịga Free Injector
Needleless Injector N'ihi Insulin
baghị uru Injector